War-murtiyeed laga soo saaray wadahadalada nabadeed ee Puntland iyo Galmudug (AKHRISO+SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
War-murtiyeed laga soo saaray wadahadalada nabadeed ee Puntland iyo Galmudug (AKHRISO+SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug lagu soo gaba-gabeeyay wadahadalo nabadeed oo u dhaxeeyay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug, kadib kulan saacado badan qaatay oo ay magaaladaasi ku yeesheen.
Labada madaxweyne ayaa maanta kulan ku yeeshay garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf ee ku yaala magaalada Gaalkacayo, waxaana kulankaasi goob-joog ka ahaa islaamarkaana dhex-dhexaadinayay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating, saraakiishii kala hogaaminaysay dagaalka, odoyaasha iyo waxgaradka labada dhinac .
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa muddo bil ka badan waxay ku dagaalamayeen galbeedka magaalada Gaalkacyo, iyadoona dagaalkaasi uu sababay qasaare nafeed iyo mid hantiyeedba, iyadoona kumanaan qof ay guryahooda isaga barakaceen.
Hadaba qodobada laga soo saaray war-murtiyeedka ayaa waxaa mid ahaa:-
In xabad joojin labada dhinac si deg deg ah u dhaqan galiyaan.
In la joojiyo dhamaan wixii abuuraya colaada taas oo la’isu mariyo hawadda.
In ay dib uga soo laabtaan dhamaan dadka ka barakacay Magaalada Galkacayo.
In labada dowlad goboleed soo magacaabeen guddiyo isku dhaf ah oo ka shaqeeya si xal waara looga gaari lahaa khilaafka soo noqnoqday.
In kulan deg deg ah oo lagu soo afjaro khilaafkan, la isugu yimaado Kismaayo 20ka bishan Noofember 2016
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaaarke oo isagu garwadeen ka ahaa wada-hadalada labada dhinac, islamarkaana suurta-galiyay inay labadaan dhinac wada-hadlaan ayaa soo dhaweeyey heshiiskan maanta la gaaray.
Wuxuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ku booriyay labada dhinac inay dhaqan geliyaan heshiiska, islamarkaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara in dagaal kale uu Galkacayo ka dhaco.
Ugu dambeyntii, Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo isna kaalin weyn ka qaatay heshiiska labada dhinac ayaa soo dhaweeyay heshiiskaas, wuxuuna labada dhinac kula dar-daarmay inay dhaqan geliyaan heshiiska..
Ilaa iyo haatan lama oga in labadaasi dhinac ay heshiiskaan markale dhaqan gelin doonaan iyo inkale, iyadoona heshiisyo hore ay labada dhinac ku heshiiyeen ay noqdeen kuwa fashilmay.
Hadaba hoos ka aqriso war-murtiyeedka lasoo saaray